Covid-19 Test Positive ဖွဈသှား တဲ့Dora Alexကိုသူငယျခငျြးကောငျး ပီသစှာနဲ့ စိတျခှနျအားဖွဈစမေယျ့ အား ပေးစကားပွောခဲ့တဲ့ယှနျးယှနျး – XB Media Myanmar
Covid-19 Test Positive ဖွဈသှား တဲ့Dora Alexကိုသူငယျခငျြးကောငျး ပီသစှာနဲ့ စိတျခှနျအားဖွဈစမေယျ့ အား ပေးစကားပွောခဲ့တဲ့ယှနျးယှနျး
မငျးသမီးခြောလေး ယှနျးယှနျးကတော့ စိတျသဘောထား နူးညံ့ဖွူစငျသူလေးဖွဈပွီး ငယျငယျ လေး ကတညျးက ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြကို သိမျးပိုကျရရှိခဲ့သူလေး ဖွဈပါတယျ ။ ယှနျးယှနျးက ပရိသတျတှရေဲ့မကျြစိရှမှေ့ာတငျ အရှယျရောကျလာခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ အစှမျးကုနျ လှသှေးကွှယျ နတေဲ့ မိနျးမပြိုလေးအရှယျကိုရောကျနပွေီ ဖွဈပါတယျ ။ မာနျမာကငျးပွီး ရငျးနှီးဖျောရှတေတျတဲ့ ယှနျးယှနျးက ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးလညျးကောငျးတာကွောငျ့ သူငယျခငျြးတှအေမြားအပွား ရ ရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ ။
ယှနျးယှနျးက အဆိုတျောအဲလကျဈရဲ့သမီးလေး Dora Alex နဲ့ဆိုရငျလညျး အရမျးကိုခငျမငျရငျး နှီး တဲ့ သူငယျခငျြးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ ။ အခုတော့ ယှနျးယှနျးက Covid19 Test Positive ဖွဈ သှားတဲ့ သူငယျခငျြး Dora အတှကျ အားပေးစကားဆိုထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ယှနျးယှနျးက ခဈြ သူငယျခငျြးအတှကျ စိတျခှနျအားဖွဈစမေယျ့ စကားလေးတှကေို ရေးသားပွီး တငျပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ယှနျးယှနျးလေးက “She is suchastrong girl!! my friend is tested positive but she still can smile and share her personal experiences. Dora Alex I’m not sure if I can even talk properly if I were you.. so, I know you will definately be able to fight it back my girl You’ll be alright!!! နားနတေုနျး သီခငျြးအသဈတှမြေားကွီးရေး ပါ
သူငယျခငျြးရေ.. နငျပွနျလာတာကိုစောငျ့နမေယျ ” ဆိုပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြ နှာထ ကျ မှာ တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ အရမျးခဈြကွတဲ့ ယှနျးယှနျးတို့သူငယျခငျြးနှဈယောကျ ရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုလညျး ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
Source & Photo Credit-Yoon Yoon’s FB Acc
မင်းသမီးချောလေး ယွန်းယွန်းကတော့ စိတ်သဘောထား နူးညံ့ဖြူစင်သူလေးဖြစ် ပြီး ငယ်ငယ် လေး ကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သူလေး ဖြ စ်ပါ တယ် ။ ယွန်းယွန်းက ပရိသတ်တွေရဲ့မျက်စိရှေ့မှာတင် အရွယ်ရော က်လာခဲ့ ပြီး အခုဆိုရင် အစွမ်းကုန် လှသွေးကြွယ် နေတဲ့ မိန်းမပျိုလေးအရွယ် ကိုေ ရာက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ မာန်မာကင်းပြီး ရင်းနှီးဖော်ရွေတတ်တဲ့ ယွန်းယွ န်းက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတာကြောင့် သူငယ်ချင်းေ တွအများအပြား ရ ရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယွန်းယွန်းက အဆိုတော်အဲလက်စ်ရဲ့သမီးလေး Dora Alex နဲ့ဆိုရင်လည်း အရ မ်းကိုခင်မင်ရင်း နှီး တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတော့ ယွန်းယွ န်းက Covid19 Test Positive ဖြစ် သွားတဲ့ သူငယ်ချင်း Dora အတွက် အားပေး စကားဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယွန်းယွန်းက ချစ် သူငယ်ချင်းအတွက် စိတ်ခွန် အားဖြစ်စေမယ့် စကားလေးတွေကို ရေးသားပြီး တင်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
ယွန်းယွန်းလေးက “She is suchastrong girl!! my friend is tested positive but she still can smile and share her personal experiences. Dora Alex I’m not sure if I can even talk properly if I were you.. so, I know you will definately be able to fight it back my girl You’ll be alright!!! နားနေတုန်း သီချင်းအသစ်တွေများကြီးရေး ပါ
သူငယ်ချင်းရေ.. နင်ပြန်လာတာကိုစောင့်နေမယ် ” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက် နှာထ က် မှာ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ယွန်းယွန်း တို့ သူ ငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ တ ယ်နော် ။
ဆေးရုံ၆ကွိမျ၇ကွိမျ အထိတကျခဲ့ရ လော ကျအောငျ ကနျြးမာရေး အခွေ အနဆေိုးဝါးခဲ့တဲ့ အကွောငျးကို ပွော ပွလာတဲ့ စှမျးဇာနညျ